ငိုကြွေးခြင်းကြောင့်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၆)မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….. - Zeekwat Hot News
ငိုကြွေးခြင်းကြောင့်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၆)မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
August 12, 20190250
သင်က အငိုသန်တဲ့သူတစ်ယောက်လား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုဆို ၀မ်းနည်းပြီး မျက်ရည်လွယ်သူလား။ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း မင်းသမီးသေလည်းငို၊ မင်းသားသေလည်းငို၊ နှစ်ယောက်မညားဘူးဆိုလည်း ငို။ ဘာလာလာ ငိုမယ် ဆိုတဲ့သူလား။
လူတချို့ကတော့ ပြောကြတယ်။ ငိုတာဟာ ပင်ပန်းတယ်တဲ့။ ဘေးကနေ မြင်ရတဲ့သူတွေလည်း စိတ်ဆင်းရဲတယ်တဲ့။ တကယ်တော့ ငိုကြွေးခြင်းမှာ အားသာချက်တွေ၊ ကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ မျက်ရည်တွေရဲ့နောက်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့….
(၂၀၁၄)ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုမှာတော့ ငိုကြွေးခြင်းဟာ လူကို သက်သောင့်သက်သာ ရှိစေပြီး ငိုကြွေးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်း အားတက်လာစေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ လူတွေက ငိုပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြရင် “ဒါနောက်ဆုံးပဲ၊ ဒီ့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်၊ နောက်မငိုတော့ဘူး” စသဖြင့် အားတင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်တဲ့။
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရှေ့မှာ တစ်ယောက်ယောက်ငိုနေတာကိုတွေ့ရင် ဒီအတိုင်းကြည့်နေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က စာနာတဲ့စိတ်နဲ့အတူ ဖေးမ ပေးကြမှာဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ တွေ့လာရမှာပါ။
(၃) နာကျင်မှုတွေကို လျော့ပါးသွားစေတယ်
ဘယ်သူ့ကြောင့် နာကျင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ငိုချလိုက်တဲ့အခါ သင့်ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတာတွေ၊ နာကျင်မှုတွေကို လျော့ပါးသွားစေပါတယ်တဲ့။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပဲ ငိုကြွေးခြင်းက အထောက်အကူဖြစ်စေတာမို့ ငိုဖို့မရှက်ပါနဲ့။
(၄) စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျသွားစေတယ်
လူတချို့ကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာပြီဆိုရင် ငိုကြွေးတဲ့အထိ ဖြစ်လာကြပြီး အဲဒီလို ငိုလိုက်ပြီးတာနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက လျော့ကျသွားကြပါတယ်တဲ့။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရတော့ ငိုကြွေးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟော်မုန်းအဆင့်ကို လျော့ကျသွားစေပြီး လူကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာစေပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၂၀၁၅)ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရတော့ ငိုကြွေးခြင်းဟာ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသတဲ့။ သူတို့က ကလေးငယ်တွေ ငိုကြွေးပြီးရင် အိပ်ပျော်သွားတတ်တဲ့အချက်ကနေ တစ်ဆင့် လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးသူတွေမှာလည်း ဒီလို ငိုကြွေးပြီးတိုင်း ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။
(၆) ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကာကွယ်ပေးတယ်
ငိုကြွေးခြင်းဟာ အဓိက အားဖြင့် မျက်လုံးကို သန့်ရှင်းစေပြီး မျက်လုံးထဲမှာ ၀င်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေကိုလည်း သတ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ medicalnewstoday က ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမြင်အာရုံကို ပိုမိုကြည်လင်လာစေဖို့ အထောက်အကူပေးနိုင်ပြီး မျက်စိနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသတဲ့။
Photo : Photographee.eu
သငကြ အငိုသနတြဲ့သူတစယြောကလြား။ ဒါမှမဟုတြ တစခြုခုဆို ဝမြးနညြးပှီး မကွရြညလြှယသြူလား။ ရုပရြှငကြှညြ့နရငြေး မငြးသမီးသလညြေးငို၊ မငြးသားသလညြေးငို၊ နှစယြောကမြညားဘူးဆိုလညြး ငို။ ဘာလာလာ ငိုမယြ ဆိုတဲ့သူလား။
လူတခွို့ကတော့ ပှောကှတယြ။ ငိုတာဟာ ပငပြနြးတယတြဲ့။ ဘေးကနေ မှငရြတဲ့သူတှလညြေး စိတဆြငြးရဲတယတြဲ့။ တကယတြော့ ငိုကှေးခှငြးမှာ အားသာခကွတြှေ၊ ကောငြးကွိုးတှလညြေးရှိနပေါသေးတယြ။ မကွရြညတြှရေဲ့နောကမြှာ ဖှစလြာတဲ့ကောငြးကွိုးတှပေေါ့။ အဲဒါတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတော့….
(၂၀၁၄)ခုနှစကြ ပှုလုပခြဲ့တဲ့ စစတြမြးတစခြုမှာတော့ ငိုကှေးခှငြးဟာ လူကို သကသြောငြ့သကသြာ ရှိစပှေီး ငိုကှေးပှီးသှားတဲ့နောကမြှာလညြး အားတကလြာစတယေလြို့ ဖောပြှထားပါတယြ။ မွားသောအားဖှငြ့တော့ လူတှကေ ငိုပှီးသှားတဲ့အခွိနကြှရငြ “ဒါနောကဆြုံးပဲ၊ ဒီ့ထကပြိုကောငြးအောငလြုပမြယြ၊ နောကမြငိုတော့ဘူး” စသဖှငြ့ အားတငြးပှီး ကိုယြ့ကိုယကြိုယြ ရှဆေ့ကသြှားနိုငဖြို့ ကှိုးစားကှပါတယတြဲ့။
ဘယသြူပဲဖှစဖြှစြ ကိုယြ့ရှမှေ့ာ တစယြောကယြောကငြိုနတောကိုတှရေ့ငြ ဒီအတိုငြးကှညြ့နကှမှော မဟုတပြါဘူး။ သူတို့က စာနာတဲ့စိတနြဲ့အတူ ဖေးမ ပေးကှမှာဖှစပြှီး သငြ့အတှကြ မိတဆြှကေောငြးတှရှေိနတယေဆြိုတာ တှလေ့ာရမှာပါ။
(၃) နာကငွမြှုတှကေို လွော့ပါးသှားစတယြေ
ဘယသြူ့ကှောငြ့ နာကငွရြတာပဲဖှစဖြှစြ ငိုခလွိုကတြဲ့အခါ သငြ့ရငထြဲမှာ ခံစားနရတောတှေ၊ နာကငွမြှုတှကေို လွော့ပါးသှားစပေါတယတြဲ့။ စိတပြိုငြးဆိုငရြာရော၊ ရုပပြိုငြးဆိုငရြာအတှကပြဲ ငိုကှေးခှငြးက အထောကအြကူဖှစစြတောမို့ ငိုဖို့မရှကပြါနဲ့။
(၄) စိတဖြိစီးမှုတှကေို လွော့ကသွှားစတယြေ
လူတခွို့ကတော့ စိတဖြိစီးမှုတှမွေားလာပှီဆိုရငြ ငိုကှေးတဲ့အထိ ဖှစလြာကှပှီး အဲဒီလို ငိုလိုကပြှီးတာနဲ့ စိတဖြိစီးမှုတှကေ လွော့ကသွှားကှပါတယတြဲ့။ လလေ့ာတှရှေိ့မှုတှအရေတော့ ငိုကှေးခှငြးဟာ ခနျဓာကိုယထြဲက ဟောမြုနြးအဆငြ့ကို လွော့ကသွှားစပှေီး လူကို ပုံမှနအြတိုငြး ပှနဖြှစလြာစပေါတယလြို့ သိရပါတယြ။
(၂၀၁၅)ခုနှစမြှာ ပှုလုပခြဲ့တဲ့ စစတြမြးတစခြုအရတော့ ငိုကှေးခှငြးဟာ ကောငြးမှနစြှာ အိပစြကနြိုငဖြို့ အထောကအြကူ ဖှစစြပေါသတဲ့။ သူတို့က ကလေးငယတြှေ ငိုကှေးပှီးရငြ အိပပြွောသြှားတတတြဲ့အခကွကြနေ တစဆြငြ့ လလေ့ာခဲ့တာဖှစပြှီး အသကကြှီးသူတှမှောလညြး ဒီလို ငိုကှေးပှီးတိုငြး ကောငြးမှနစြှာ အိပပြွောနြိုငတြဲ့ အခှအနေတှရှေေိတယလြို့ တှရှေိ့ခဲ့ကှတာပါ။
(၆) ဘကတြီးရီးယားတှကေို ကာကှယပြေးတယြ
ငိုကှေးခှငြးဟာ အဓိက အားဖှငြ့ မကွလြုံးကို သနြ့ရှငြးစပှေီး မကွလြုံးထဲမှာ ဝငနြတေဲ့ ဘကတြီးရီးယား တှကေိုလညြး သတပြစလြိုကနြိုငတြယလြို့ medicalnewstoday က ဖောပြှပါတယြ။ ဒါ့အပှငြ အမှငအြာရုံကို ပိုမိုကှညလြငလြာစဖေို့ အထောကအြကူပေးနိုငပြှီး မကွစြိနဲ့ဆိုငတြဲ့ရောဂါတှကေိုလညြး ကာကှယပြေးနိုငပြါသတဲ့။
သူစိမ်းအိမ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ခင်လေးနွယ်
ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ပျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ အလှမယ် ရွှေအိမ်စည်